Ny Andevon’ny Romanina, Loko Volomparasy Tany Fenisia | Fantatrao Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Myama Ngabere Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nanao ahoana ny fiainan’ny andevo fahiny, eran’ny Fanjakana Romanina?
Rojo vy fanaon’ny andevo romanina
Olona maro no lasa andevo, nanerana ny Fanjakana Romanina fahiny. Babo an’ady izy ireny, na nalaina an-keriny, ary namidy ka matetika no tsy nahita ny tranony na ny fianakaviany intsony.
Maro no noterena hiasa mafy loatra, ka maty tany amin’ny toeram-pitrandrahana. Mba azoazo kokoa aza ny fiainan’ireo nasaina namboly na niasa an-trano. Mety ho noterena hanao rojo vy ny andevo, ary nisy soratra teo amin’ilay izy hoe homena valisoa izay mamerina azy any amin’ny tompony raha mandositra izy. Nasiana marika F na hoe fugitivus (mpandositra) teo amin’ny handrin’izay andevo nandositra matetika.
Resahin’ny bokin’i Filemona ao amin’ny Baiboly, fa namerina an’i Onesimosy tany amin’i Filemona ny apostoly Paoly. Andevon’i Filemona izy io fa nandositra, ka nanana zo hanafay azy ny tompony. Nampirisihin’i Paoly anefa i Filemona mba ‘handray azy amin-katsaram-panahy’, satria tokony hifankatia sy ho mpinamana izy ireo.—Filemona 10, 11, 15-18.
Nahoana ny loko volomparasy no nampahalaza an’i Fenisia fahiny?
Azo lazaina hoe mifanitsy amin’i Liban ankehitriny i Fenisia. Nampahalaza azy io ny loko volomparasy avy any Tyro. Nisy mpanao asa tanana avy any aza nasain’i Solomona, mpanjakan’ny Israely, hanamboatra “volonondry volomparasy” mba hampiasaina tao amin’ny tempoly.—2 Tantara 2:13, 14.
Ny loko volomparasy avy any Tyro no loko sarobidy indrindra fahiny. Tsy mora mantsy ny nanamboatra azy. Tsy maintsy naka sifodranomasina atao hoe murex be dia be aloha ny mpanjono, satria 12 000 be izao no nilaina vao nahavita akanjo iray. * Nesorina avy tao amin’ny akorany ny sifotra avy eo, mba hangalana an’ilay fihary mamoaka loko ao anatiny. Asiana sira ireo fihary ary atapy amin’ny masoandro mandritra ny telo andro. Atao ao anaty barìka misarona indray ilay izy, asiana ranomasina, ary tanehina amin’ny afo malefaka mandritra ny andro maromaro.
Mirefy dimy ka hatramin’ny valo santimetatra ny halavan’ny akoran’izy ireo. Namokatra loko volomparasy foana ny Tyrianina nandritra ny an-jatony taona sady afaka nivarotra azy ireny, noho izy nahita lalam-barotra maro sady nanjana-tany. Mbola hita manodidina ny Ranomasina Mediterane ka hatrany Cadix, any andrefana, ny sisan-javatra nampiasaina tamin’ny fanamboarana an’ireny loko ireny.
^ feh. 8 Mirefy dimy ka hatramin’ny valo santimetatra ny halavan’ny akoran’izy ireo